နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် International Panel on Climate Change ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနှင့် Energy Farm International Foundation ဥက္ကဋ္ဌ Dr.R.K. Pachauri ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် International Panel on Climate Change ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနှင့် Energy Farm International Foundation ဥက္ကဋ္ဌ Dr.R.K. Pachauri ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဩဂုတျ 25, 2017 In: Appointment, ChairpersonNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် International Panel on Climate Change (IPCC) ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနှင့် Energy Farm International Foundation ဥက္ကဋ္ဌ Dr.R.K. Pachauri ဦးဆောင် သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၌ ဒီရေတောများ ထိန်းသိမ်းရေး၊ ကျေးလက်ဒေသများ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြ ကြောင်း သိရှိရသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ International Panel on Climate Change ဥက်ကဋ်ဌဟောငျးနှငျ့ Energy Farm International Foundation ဥက်ကဋ်ဌ Dr.R.K. Pachauri ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သညျ International Panel on Climate Change (IPCC) ဥက်ကဋ်ဌဟောငျးနှငျ့ Energy Farm International Foundation ဥက်ကဋ်ဌ Dr.R.K. Pachauri ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနနေံ့နကျ ၁၀ နာရီခှဲတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှေ့ ဆုံသညျ။
တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာနိုငျငံ၌ သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးနှငျ့ ရာသီဥတု ပွောငျးလဲမှု တိုကျဖကျြရေး၊ ဧရာဝတီမွဈဝကြှနျးပျေါ ဒသေ၌ ဒီရတေောမြား ထိနျးသိမျးရေး၊ ကြေးလကျဒသေမြား၌ လြှပျစဈဓာတျအားရရှိရေး စသညျ့ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျး သိရှိရသညျ။